Ny fanjarian-tsakafo mialoha ny fampihetseham-batana dia tena ilaina tokoa hanatsarana ny valin'ireo izay manao fiofanana mavesatra. Ny pre-workout dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana anao ny angovo ilainao mandritra ny fiofanana fa tsy very lanja. Ary mieritreritra a sakafo ambany karbaona, ny filokana amin'ny menio toy izany dia mety hahasoa tokoa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome torohevitra momba ny sakafo izahay fiofanana mialoha karbaona ambany.
Ho asehonay anao ny santionany amin'ny menu ho an'ny sakafo maraina, atoandro, fananganana hozatra ary maro hafa. Hanaraka!
Fiofanana mialoha karbôtika ambany ho an'ny sakafo maraina
Ho an'ireo izay miasa amin'ny maraina, ny fampiasam-bola amin'ny sakafo maraina ambany karbaona dia hanampy amin'ny fampivoarana ny toe-tsainao ary hanatsara ny vokatra azo avy amin'ny hozatra.
Ohatra ny sakafo karbaona ambany izay azo ampiana amin'ny sakafo alohan'ny fampihetseham-batanao amin'ny maraina ananantsika:
Oméliety tototry ny fromazy matavy ambany ary tsy misy gliosida miharo.
Vitamina avokado tsy misy siramamy nampiana.
Ny atody dia tsy afa-mihetsika afa-tsy amin'ny fotsy hoditra, amin'ity fomba ity dia miantoka ny proteinina ianao raha tsy misy ny vokadratsin'ny tavy misy ao anaty yolk.
Mofomamy mofo fromazy. Ity sakafo ity dia misy gliosida kely, saingy kely kokoa noho ny mofo mahazatra, ohatra.
Ny voankazo toy ny frezy, watermelon ary koa cantaloupe dia ohatra iray amin'ireo izay saika tsy misy gliosida ary azo ampiana amin'ny sakafo maraina misy anao ambany karbika.
fanazaran-tena mialoha ny sakafo atoandro
Ho an'ireo izay miasa amin'ny tolakandro, aorian'ny sakafo atoandro dia mila mitandrina ny sakafo izay nohanina mandritra izany sakafo izany ianao. Matetika dia matanjaka kokoa ny sakafo atoandro, ary mieritreritra ireo sakafo tsy misy gliosida azonao laniana, ohatra:
Hena mahia mahia toy ny akoho sy trondro. Miezaha hisoroka ny hena mena ary koa ny henan-kisoa, ampio ireo karazana ireo mandritra ny sakafo 2 isan-kerinandro fotsiny.
Salady legioma nandrahoina. Azonao atao ny mampiasa cauliflower, broccoli, carrot ary na ovy mamy izay misy index glycémie ambany kokoa noho ny ovy mahazatra. Torohevitra iray ny fahandroana ireo akora ireo ary asio menaka oliva, sira ary voasarimakirana kely. Matsiro.
Os atody nandrahoina izy ireo koa dia safidy tsara ho an'ny sakafo karbaona ambany ho an'ny sakafo atoandro. Ny fampidirana azy ireo amin'ny salady dia safidy tsara amin'ny fandaniana azy ireo.
[junkie-tabs] [junkie-tabs title=”Fandraisana an-tsoratra 101 ambany karbona hohanina nefa tsy misy fitaka!“] Ahoana ny amin’ny fihinanana sakafo matsiro sy mahasalama izay hanampy anao hampihena lanja? Tonga ny 100% digital cookbook, miaraka amin'ny 101 Resety karbôna ambany ho an'ny sakafo maraina, atoandro, sakafo hariva ary zava-mamy! Afaka manao izany ao an-trano ianao ary mampihena lanja! Jereo bebe kokoa eto.. [/junkie-tab] [/junkie-tabs]
hahazo tombony hozatra
Amin'ny sakafo ambany alohan'ny fiofanana momba ny karbaona dia mandrisika hatrany ny fahazoana vatan'ny hozatra. Izany dia vokatry ny fihazonana sakafo karbaona ambany dia mampitombo ny habetsaky ny proteinina voatana, izay mitarika fanatsarana ny fananganana hozatra amin'ny vatana, mandrisika ny fahazoana hozatra.
Noho izany, asehonay ny fihinanana sakafo be proteina, ambany tavy ary tsy misy gliosida amin'ny endriny.
Ohatra iray amin'ny sakafo hahazoana tombony ny hozatra dia:
Tratra akoho voatono
Ovy nendasina hamonoana ho puree na salady.
Ny trondro toy ny salmon sy ny tuna dia tsara ho an'ity karazan-tsakafo ity.
Atody nandrahoina sy voahandro tamin'ny salady.
Zucchini nofenoina mincemeat masaka.
Salady ravina amin'ny karazany rehetra.
Legioma voaendy amin'ny menaka sy sira.
Fiomanana amin'ny pasta natao tamin'ny kôliflower, oatmeal, akoho ary safidy hafa tsy misy gliosida. Ohatra tsara dia ny koba pizza misy karbô ambany.
Inona no tokony hohanina amin'ny fiofanana mialoha karbaona?
Ny olona manao sakafo mialoha ny fampihetseham-batana indraindray dia very hevitra be momba izay sakafo hohaniny.
Ny sakafo alohan'ny fampiofanana dia misy ny lalàny, izay manome angovo indrindra nefa tsy manampy tavy amin'ny sakafo. Ny fieritreretana ny sakafo alohan'ny fampiofanana karbaona ambany dia voatazona ireo fitsipika ireo, na izany aza, tsy tokony hihinana sakafo misy gliosida ianao.
Ohatra amin'ny sakafo azo zohina amin'ity karazana sakafo ity dia:
Ny hena misy karazany, legioma, legioma toy ny karaoty, dipoavatra, poaka ary asparagus, anana isan-karazany, voankazo mena toy ny frezy sy plum, avocado, voanjo isan-karazany, fromazy matavy ary voamaina toy ny flaxseed ary koa ireo oats.
Resipeo hatao ao an-trano
Araka ny hitanao dia nandany sakafo be dia be izahay izay azo ampiasaina amin'ny fiofanana mialoha karbaona ambany. Anjaranao izao ny mampiasa ireto akora ireto hanomanana resipeo izay safidinao. Ny zavatra ilainao dia ny famoronana sy ny finiavana hikaroka izay tianao indrindra.
Etsy ambany izahay dia nanasaraka ny sasany ho anao mba hahazo aingam-panahy sy hatao ao an-trano.
tongolo mena voatetika
tongolo fotsy voatetika
Famonoana antsasaky ny masaka
Vinaingitra divay fotsy 50 ml
Menaka iray sotro
Ao anaty vilia iray dia ampio ny vinaingitra sy diloilo, avy eo asio sira sy dipoavatra mba hanandrana.
Ampio ny tongolo voatetika sy ny zavokà ary afangaro. Arotsahy ny voatabia voatetika dia afangaro.
Atsofohy amin'ny menaka voanio ny proteinina
Voanio iray voanio vao voakiky
Proteinina roa sotro sôkôla na frezy
Kaopy misy ranomandry rano
Sotro fihinana menaka voanio roa
Afangaroy ao anaty blender ireo akora, avelao ny voanio voakiky. Araraka ao anaty kaopy ary atofa eo amboniny ny voanio voakiky.
Paty Zucchini miaraka amin'ny makamba
• Zucchini kely voadidy ho manify
• Menaka voanio na menaka oliva iray sotrokely
• sira sy ranomasina dipoavatra mainty, mba hanandrana
Afangaroy ny zucchini ho paty spaghetti.
Afangaro amin'ny menaka voanio na menaka oliva amin'ny lafaoro iray ary apetraho ireo kofehy zucchini. Sasao mandritra ny 5 minitra na mandra-pahatongan'ny malemy ny zucchini. Manaova sira sy tongolo lay ary dipoavatra mainty.
Vonoy ny hafanana ary ampio ny hena tiana, amin'ity tranga ity ny makamba, ary ny saosy safidinao.